जीवनशैली तथा राेचक तथ्य | नेपाली जनता :: Nepali Janta: | Page 5
नियमित सेक्स गर्ने महिला कसरी चिनिन्छन् ? जान्नुहोस् यो रोचक कारण
एजेन्सी । महिलाहरु प्राकृति रुपमा नै आफैमा सुन्दर हुन्छन् । उहीहरुको सुन्दरताको सदाबहार तारिफ नै हुन्छ । तर पुरुषको तुलनामा महिलाको शारीरिक बिहे लगत्तै नै परिवर्तन भइहाल्छ । के कारण छ त्यसको पछाडी ? सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्स का…
योनि गोरो बनाउने यस्तो प्रतिश्पर्धा !
हद भन्दा बढी नै सेक्सी भएको भन्दै यी नायिकामाथी सरकारले प्रतिवन्ध लगायो ! (तस्विर हेर्नुस)
पछिल्लो युवा पुस्तामा सेक्सी हुनुलाई एक सुन्दरी युवतीको पहिचाहनको रुपमा लिने गरिन्छ । नेपाली समाजमा पनि चलचित्रको माध्यमबाट यसको असर राम्रै परेको देखिएको छ । युवत्ती हुनको लागि सेक्सी हुनैपर्छ भन्ने कतिपयको मान्यता रहेको छ ।
हाम्रो समाजमा कहिकतै महिलाहरु ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा…
यौन सम्पर्क (सेक्स) गर्ने क्रमलाई आनन्दमय बनाउन मानिसहरू अनेक उपाय सोच्छन् ।
सेक्सका क्रममा पुरुष साथीले महिलाको स्तन मिच्ने समेत गर्छन् । यौन सम्पर्कअघि यौन उत्तेजना बढाउन स्तन मिच्ने गरेपनि यौन सम्पर्कका क्रममा स्तन मिच्नु ठीक हो कि होइन भन्ने…
यौन एक प्रकारको प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यौनलाई लिएर कयौं किसिमका सकारात्मक र नकारात्मक कुरा हुनु खासै नौलो कुरा होइन । केही अपवादबाहेक सबै मानिस यौनकार्यमा सहभागी हुन्छन् । कसैले विवाहपछि सेक्स गर्छन् भने कसैले विवाहअघि नै गर्छन् ।…
नेपालमा कृत्रिम यौनाङ्ग (सेक्स टोय) को बिक्रि बढ्दै, कति पर्छ त मूल्य? कहाँ कहाँ किन्न पाइन्छ??
कृत्रिम यौनाङ्ग सेक्स टोय हरुमा पुरुष र महिला दुवैका पर्छन् । विशेषगरि महिलाको लागि पुरुषको पेनिस र पुरुषको लागि महिलाको भेजिना आवश्यक हुन्छ । पुरुषले प्रयोग गर्ने सेक्स टोयमा २५ सयदेखि २५ हजार सम्मका छन् । त्यसैगरि महिलाले प्रयोग…
सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने चलनः श्रीमतीसँग सेक्स गराएर मात्रै पाहुनाको औपचारिक स्वागत
एजेन्सी । संसारमा विचित्र विचित्र खालका संस्कारहरु छन् । भारतमा एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ आफ्नै श्रीमतीसँग सेक्स गराएर मात्रै पाहुनाको औपचारिक रुपमा स्वागत गर्ने गरिन्छ ।
यो प्रचलन भारतका विभिन्न गाउँमा अझै पनि कायमै छ । भारत सरकारले यो…
बिवाहपछि श्रीमान श्रीमतीबीच अक्सर पैसाको विषयमा मनमुटाव रहन्छ । पैसालाई हेर्ने दृष्टिकोण दुबैको आ–आफ्नो हुनसक्छ । तपाईं कस्तो वातावरणमा हुर्किनु भयो र कस्तो शिक्षा–दिक्षा पाउनु भयो भन्ने कुराले पनि तपाईको भविष्य निर्धारण गर्छ । यही कारण पछि गएर सम्बन्धमा…
नेपालमा यौन इच्छा भएर पनि लिंग कडा नहुने युवाहरू बढ्दो क्रममा कारणा यस्ताे ?
काठमाडौ । डा. अनुपमा कार्की चर्म, यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञका रूपमा नेपालकै पुरानो वीर अस्पतालमा कार्यरत छिन् । उनले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पतालबाट सन् २००८ मा पोस्ट ग्राजुएट (पिजी) गरेकी छिन् । सन् २००१ मा एमविविएस…